ဘ၀မှာ လိုအပ်တဲ့ လူ(၃)မျိုး – Gentleman Magazine
ဘ၀မှာ လိုအပ်တဲ့ လူ(၃)မျိုး
11/07/2017 11/07/2017 escapetravelmagazine
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောဆိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရသူတွေက သင့်ဘ၀နဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ အထောက်အကူပြုနိုင်သူတွေ ရှိနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဟန်ချက်ညီမျှမှု မရှိပဲ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အလားအလားတွေကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဘ၀မှာ အမှန်တကယ်လိုအပ်တာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ ဆိုတာကို သိရှိပြီး ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို လိုအပ်ပါသလဲ…???
၁။ သင့်ကို လိုအပ်သူတွေ….
ဒီလူတွေက သင့်ကို ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကျွန်တော်တို့ ကုန်ပ္စည်းတစ်ခုကို တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်သူမှ မလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါသလား။ မပြောနိုင်ပါဘူး။ လိုအပ်ချက်က တန်ဖိုးထားမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကို အလုပ်ကြိုးစားဖို့၊ ဇွဲသတ္တိရှိဖို့ တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ သင့်ကိုလိုအပ်နေသူတွေ ရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကို လိုအပ်တဲ့သူတွေထဲမှာ သင်ကူညီပေးနေရသူတွေ၊ သင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေရသူတွေနဲ့ သင်ဦးဆောင်နေရသူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
၂။ သင့်ကို ကျွေးမွေးထောက်ပံ့နိုင်သူတွေ….
သင့်ကို လိုအပ်နေသူတွေ ရှိနေသလို သင်ကို ကျွေးမွေးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့် သင်က လိုအပ်နေသူတွေလည်း ရှိနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို လိုအပ်နေသူတွေသာ ရှိပြီး သင့်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်သူ မရှိဘူးဆိုရင် မကြာခင်မှာပဲ ဘ၀ပျက်မှာ သေချာပါတယ်။ သင့်ကို ကျွေမွေးထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းတွေ၊ ငွေကြေးနဲ့ လက်ရောက်အကူအညီတွေကိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေကိုလည်း ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး သင့်ကို ကျွေးမွေးထောက်ပံ့နိုင်သူတွေထဲမှာ လမ်းပြဆရာတွေ၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသူတွေ၊ ယုံကြည်အားကိုးထိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သင့်အတွက် တစ်ခုခုသင်ယူလို့ ရနိုင်မယ့်သူတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။
၃။ သင်နဲ့ အတူရှိနေချင်သူတွေ….
သင့်ကို လိုအပ်သူတွေ၊ ထောက်ပံ့နိုင်သူတွေလိုပဲ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့သူတွေကတော့ သင်နဲ့ အတူရှိနေချင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့နဲ့ဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်လည်း ပျော်ရွှင်ရသလို၊ သူတို့လည်း ပျော်ရွှင်နေရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုအမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဆိုးတူကောင်းဖက်၊ ပေါဖော်ပေါဖက်တွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေက သင့်ရဲ့ စိတ်ကိုအနားရစေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဘ၀မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး၊ အောင်မြင်ဖို့အတွက် သင့်ဘေးနားမှာ ဒီလိုလူသုံးမျိုးနဲ့ ၀န်းရံထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဘဝမှာ လိုအပျတဲ့ လူ(၃)မြိုး
သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ပွောဆိုပေါငျးသငျးဆကျဆံနရေသူတှကေ သငျ့ဘဝနဲ့ အောငျမွငျမှုအပျေါမှာ သကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ တညျငွိမျတဲ့ဆကျဆံရေးနဲ့ အထောကျအကူပွုနိုငျသူတှေ ရှိနဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီဆကျဆံရေးတှမှော ဟနျခကျြညီမြှမှု မရှိပဲ မတညျမငွိမျဖွဈနမေယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ အလားအလားတှကေို ရပျတနျ့သှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ဘဝမှာ အမှနျတကယျလိုအပျတာ ဘယျလိုလူမြိုးတှလေဲ ဆိုတာကို သိရှိပွီး ဆကျဆံရေးတညျဆောကျထားနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ဘယျလိုလူမြိုးတှကေို လိုအပျပါသလဲ…???
၁။ သငျ့ကို လိုအပျသူတှေ….
ဒီလူတှကေ သငျ့ကို ရညျရှယျခကျြတှေ ပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီအခကျြကို ကြှနျတျောတို့ ကုနျပ်စညျးတဈခုကို တနျဖိုးထားမှုနဲ့ နှိုငျးယှဉျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ ဘယျသူမှ မလိုအပျတဲ့ကုနျပစ်စညျးတဈခုကို ကောငျးတယျလို့ ပွောနိုငျပါသလား။ မပွောနိုငျပါဘူး။ လိုအပျခကျြက တနျဖိုးထားမှုကို ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကို အလုပျကွိုးစားဖို့၊ ဇှဲသတ်တိရှိဖို့ တှနျးအားပေးနိုငျတဲ့ သငျ့ကိုလိုအပျနသေူတှေ ရှိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သငျ့ကို လိုအပျတဲ့သူတှထေဲမှာ သငျကူညီပေးနရေသူတှေ၊ သငျလကေ့ငျြ့သငျကွားပေးနရေသူတှနေဲ့ သငျဦးဆောငျနရေသူတှေ ပါဝငျပါတယျ။
၂။ သငျ့ကို ကြှေးမှေးထောကျပံ့နိုငျသူတှေ….
သငျ့ကို လိုအပျနသေူတှေ ရှိနသေလို သငျကို ကြှေးမှေးထောကျပံ့ပေးနိုငျမယျ့ သငျက လိုအပျနသေူတှလေညျး ရှိနရေမှာ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကို လိုအပျနသေူတှသော ရှိပွီး သငျ့ကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျမယျသူ မရှိဘူးဆိုရငျ မကွာခငျမှာပဲ ဘဝပကျြမှာ သခြောပါတယျ။ သငျ့ကို ကြှမှေေးထောကျပံ့တယျဆိုတဲ့နရောမှာ ရုပျဝတ်ထုပိုငျးတှေ၊ ငှကွေေးနဲ့ လကျရောကျအကူအညီတှကေိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတျပါဘူး။ အကွံဉာဏျကောငျးတှေ၊ အဆကျအသှယျကောငျးတှကေိုလညျး ဆိုလိုပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး သငျ့ကို ကြှေးမှေးထောကျပံ့နိုငျသူတှထေဲမှာ လမျးပွဆရာတှေ၊ ခဈြခငျမွတျနိုးရသူတှေ၊ ယုံကွညျအားကိုးထိုကျတဲ့ ခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ သငျ့အတှကျ တဈခုခုသငျယူလို့ ရနိုငျမယျ့သူတှေ အားလုံးပါဝငျပါတယျ။
၃။ သငျနဲ့ အတူရှိနခေငျြသူတှေ….
သငျ့ကို လိုအပျသူတှေ၊ ထောကျပံ့နိုငျသူတှလေိုပဲ နောကျထပျအရေးကွီးတဲ့သူတှကေတော့ သငျနဲ့ အတူရှိနခေငျြသူတှဖွေဈပါတယျ။ ဆိုလိုတာက သူတို့နဲ့ဆိုရငျ ဘာပဲဖွဈဖွဈ သငျလညျး ပြျောရှငျရသလို၊ သူတို့လညျး ပြျောရှငျနရေသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြးတှကေ ဒီလိုအမြိုးအစားထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ ဆိုးတူကောငျးဖကျ၊ ပေါဖျောပေါဖကျတှလေို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒီလူတှကေ သငျ့ရဲ့ စိတျကိုအနားရစနေိုငျပါတယျ။
သငျ့ဘဝမှာ ကနျြးမာပြျောရှငျပွီး၊ အောငျမွငျဖို့အတှကျ သငျ့ဘေးနားမှာ ဒီလိုလူသုံးမြိုးနဲ့ ၀နျးရံထားဖို့ လိုပါတယျ။
Previous: သင့်ဘ၀ကို သိသာစွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်စေနိုင်မည့် အလေ့အကျင့်(၇)ခု
Next: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်စေနိုင်မည့် နည်းလမ်း (၁၀)